admin – Child Pati
admin June 14, 2019	No Comments Tarkeshwor Muncipality
तारकेश्वर नगरपालिका काठमाण्डौ जिल्लाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित प्राकृतिक रुपमा सुन्दर नगरपालिका हो “तारकेश्वर” । साविकका ७ वटा साङ्ला, जितपुरफेदी, काभ्रेस्थली, धर्मस्थली, गोलढुङ्गा, मनमैजु र फुटुङ गाविसहरु मिलेर बनेको यस तारकेश्वर नगरपालिकामा ११ वटा वडा रहेका छन्…
View More बालमैत्री स्थानीय तह
एकछिन हासौँ है !
एउटा यात्रु कन्डक्टरसँग सोध्दै थियो । यात्रुः दाई ! यहाँदेखि कोटेश्वरसम्मको भाँडा कति हो ? कन्डक्टर: सामानको पर्दैन, मान्छेको चाहिँ ५० रुपैयाँ लाग्छ । यात्रुः त्यसोभए सामान मात्र लगिदिनुस् । म चाहिँ हिँडेर आउँछु ।…
View More एकछिन हासौँ है !
ग्राहकः साहुजी, राम्रो जापानिज रेडियो दिनुस् न । साहुजीले रेडियो दिन्छ । ऊ रेडियो किनेर चौतारामा बसेर सुन्न थाल्छ । रेडियोबाट आवाज आउँछ,‘यो रेडियो नेपाल हो ।’ उ त्यहीँबाट फर्कन्छ । ग्राहकः साहुजी, तपाईंले त…
विद्यार्थीः गणित सरसँग कुरा गर्दै । सर नेपाली पढाउने सर नेपालीमै कुरा गर्नुहुन्छ । अङ्ग्रेजी पढाउने सर अङ्ग्रेजीमै कुरा गर्नुहुन्छ तर सर तपाईं चाहिँ किन गणितमा कुरा गर्नुहुन्न ? गणित सर (रिसाउँदै): बार्‍ह सताइस कुरा…
विद्यार्थीः सर, कसैले केही नगरे सजाय दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न ? शिक्षकः कसैले केही पनि गरेको छैन भने किन सजाय दिने । विद्यार्थीः आज मैले गृहकार्य गरेको छैन सर ।